2009-11-29 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Kaspersky install ​လုပ်​မ​ရ​သည့် ​ပြ​ဿ​နာ​အ​စ AVG ​က
​မ​နေ့​က ​ထိုင်း​က ​သူ​ငယ်​ချင်း ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​သား ​တစ်​ယောက်​ကို AVG ​က​နေ kaspersky ​ကို ​ပြောင်း​ပါ​လား​လို့ ​ပြော​မိ​လိုက်​တာ​နဲ့​ပဲ ​သူ့​ကွန်​ပျူ​တာ ​လာ​ထိုး​အပ်​ပါ​လေ​ရော . ​တင်​ပေး​ပါ​ဦး​တဲ့ . ​သူ​တင်​တာ​မ​ရ​လို့​တဲ့ . ​ဇာတ်​လမ်း​က ​အဲ့​မှာ ​စ​တော့​တာ​ပဲ ၄ ​ဆင့်​ကို ​လုပ်​လိုက်​ရ​တယ် . ​ပြ​ဿ​နာ​က kaspersky ​က ​လက်​မ​ခံ​တာ​က ​စ​တာ​ပဲ . ​ကဲ AVG ​က​နေ kaspersky ​ပြောင်း​ပြီး ​တင်​ချင်​သူ​များ ​အ​ခက်​အ​ခဲ​ရှိ​ရင် ​ဖြေ​ရှင်း​နိုင်​အောင်​လို့ ​ပို့စ်​တင်​ပေး​လိုက်​တာ​ပါ . kasprsky ​ကို add and remove program ​က​နေ​လဲ ​ဖြုတ်​လို့​မ​ရ​ပါ​ဘူး . ​ဘယ်​လို​ဖြုတ်​ဖြုတ် ​မ​ပြုတ်​တဲ့​အ​ပြင် ​ပြုတ်​သွား​ပြန်​တော့​လဲ kasprsky ​ပြောင်း​လို့​မ​ရ​ဘူး . ​ကဲ ​အောက်​က ​အ​ဆင့်​လေး ​တွေ​အ​တိုင်း ​လုပ်​ကြည့်​ကြ​ပါ .
AVG antivirus program ​ကို uninstaller program ​နဲ့ ​ဖြုတ်​လိုက်​ပါ . ​မ​ရှိ​သေး​ရင် ​ဒီ​မှာ ​တင်​ထား​ပေး​ပြီး​သား​ပါ . add and remove program ​က​နေ uninstall ​လုပ်​ပြီး ​ဖြုတ်​လို့​မ​ရ​တဲ့ software ​မှန်​သ​မျှ​ကို Uninstaller ​နဲ့​ပဲ ​ဖြုတ်​လို့​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ် . ​ကဲ ​ဖြုတ်​ပြီး​ပြီး​ချင်း ​တင်​လိုက်​တော့ ​သူ​က​လက်​မ​ခံ​ဘူး AVG ​တင်​ထား​တယ် ​ပြော​နေ​တယ် . ​အဲ့​ဒါ​နဲ့ ​အောက်​က ​အ​ဆင့်​တွေ​အ​တိုင်း ​လုပ်​လိုက်​တာ ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​တယ် .
(၁) Start >> Run ​ကို​သွား​ပါ
(၂) Run box ​ထဲ​မှာ regedit ​ရိုက်​ထည့်​ပြီး OK ​ပေး​လိုက်​ပါ
HKEY_LOCAL_MACHINE >> SOFTWARE >> ​ကို​ရွေး​ပြီး ​ဘေး​က​မြှား​ကို ​ဆက်​နှိပ်​လိုက်​တာ​နဲ့ ​မိ​မိ​ကွန်​ပျူ​တာ​မှာ ​တင်​ထား​သ​မျှ program ​တွေ ​အ​ကုန်​လုံး​ကို ​တွေ့​ရ​မှာ​ပါ . ​အဲ​ဒီ့​အ​ထဲ​က ​ဖျက်​တုန်း​က ​မ​ပျက်​ခဲ့​တဲ့ AVG ​ဖိုင်​ကို ​လိုက်​ရှာ​ပြီး Right click ​ထောက်​ပြီး Delete ​ပေး​လိုက်​ပါ .
HKEY_LOCAL_MACHINE >> SOFTWARE >> Microsoft >> Windows >> CurrentVersion >> Uninstall >> AVG8uninstall ​ဆို​တဲ့​ဖိုင်​ကို ​ပုံ-၃ ​ထဲ​က​အ​တိုင်း rightclick ​ထောက်​ပြီး Delete ​ပေး​လိုက်​ပါ . ​အဲ့​လောက်​ဆို​ရင်​တော့ ​ပုံ​မှန်​အ​တိုင်း​ဆို​ရင် kaspersky ​တင်​လို့​ရ​ပါ​ပြီ .
​အဲ့​ဒါ​နဲ့​ရ​ပြီ​ထင်​ပြီး ​ပြန်​တင်​လိုက်​တယ် . ​မ​ရ​သေး​ပါ​ဘူး​တဲ့ ​ကျန်​သေး​တယ် ​ပြော​တာ​နဲ့ ​နောက်​ဆုံး ​အ​ဆင့်​အ​နေ​နဲ့ AVG Remover ​ကို run ​လိုက်​တော့​မှ AVG Remover tool ​က ​အ​ကုန်​လုံး​ဖြုတ်​ပေး​သွား​တယ် . ​ပြီး​တော့​မှ kaspersky 2010 ​က ​တက်​လာ​တယ် . ​တစ်​ခါ​တစ်​လေ ​နံ​ပါတ်(၁) ​နဲ့​တင် ​အ​ဆင်​ပြေ​သ​လို ​တစ်​ခါ​တစ်​လေ ​အ​ဆင့်(၂)​အ​ထိ​လုပ်​တာ​နဲ့ ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​ပါ​တယ် . ​လုံး​ဝ​မ​ရ​ခဲ့​ရင် ​ခက်​ခဲ​နေ​မှာ​စိုး​လို့ ​ကျွန်​တော် AVG ​မ​လို​ချင်​လို့ ​ဖြုတ်​တဲ့ ​အ​ခါ​မှာ ​တွေ့​ကြုံ​ရ​တဲ့ ​အ​ခက်​အ​ခဲ​လေး​ကို ​ပို့စ်​အ​ဖြစ်​တင်​ပေး ​လိုက်​တာ​ပါ . ​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ ​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်​ဗျာ . AVG REMOVER TOOL ​ကို ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ယူ​လိုက်​ပါ .
Khine Pan Sone : ​အစ်​ကို​ရေ ​ဖိုင်​တွေ​က ​ဘယ်​လို​ဖြေ​ရ​မှာ​လဲ ​မ​သိ​ဘူး . ms 2003 ​က Download ​လုပ်​ပြီး​ပါ​ပြီ . ​ဘယ်​လို​ဆက်​လုပ်​ရ​မှာ​လဲ ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​ဦး .
​ကျွန်​တော် ​ဒါ​ကို ​လွယ်​လို့​မ​ရေး​တာ​ပါ . ​တော်​တော်​များ​များ​က ​ဖိုင်​ဖြေ​နည်း​ကို ​မ​သိ​ကြ​ဘူး ​ဖြစ်​နေ​တယ် . ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့် ​ရေး​လိုက်​တာ​ပါ . ​လွယ်​ပါ​တယ် . ​ဖိုင်​ဘာ့​ကြောင့် ​အ​များ​ကြီး​ခွဲ​ပြီး ​တင်​ရ​သ​လဲ​လို့ ​မေး​ချင်​တဲ့ ​သူ​များ​အ​တွက် ​တစ်​ခါ​တည်း ​ဖြေ​ပေး​ပါ့​မယ် . ​ဖိုင်​တစ်​ဖိုင်​ကို 250 MB ​ရှိ​ကြ​တယ်​စို​ပါ​စို့​ဗျာ . ​အဲ့​ဖိုင်​ကို ​မ​ခွဲ​ပဲ​နဲ့ 250 MB ​တစ်​ဖိုင်​တည်း hosting site ​မှာ upload ​လုပ်​ပြီး ​တင်​လိုက်​မယ်​ဗျာ . ​တင်​တဲ့​သူ​ဖက်​က speed ​ကောင်း​ရင်​တော့ ​အို​ကေ​မယ် . ​အဲ့​လို​တင်​လိုက်​ခြင်း​အား​ဖြင့် ​ဆိုး​ကျိုး​တွေ ​ဘာ​တွေ​ဖြစ်​လာ​မ​လဲ
(၁) Download ​လုပ်​တဲ့​သူ​ဖက်​မှ ​အ​ချိန်​ကြာ​မြင့်​စွာ Download ​လုပ်​ယူ​ရ​ခြင်း
(၂) ​ဖိုင်​တင်​သည့် ​သူ​ဖက်​မှ​လဲ ​ဖိုင်​ဆိုက်​ကြီး​သည့်​အ​တွက် ​ဝဘ်​ဆိုက်​တွေ​က ​လက်​မ​ခံ​ခြင်း (​ဝဘ်​ဆိုက်​တိုင်း ​အ​များ​ဆုံး 200 MB ​လောက်​အ​ထိ​ပဲ ​လက်​ခံ​တတ်​ပါ​တယ်)
(၃) ​ဝဘ်​ဆိုက်​မှ ​သတ်​မှတ်​ထား​သော ​အ​ချက်​ထဲ​တွင်​ပါ​ဝင်​သည့် ​ဖိုင်​ဆိုက် 100 MB ​နှင့်​အ​ထက်​ဆို​လျှင် ​တစ်​ပတ်​အ​တွင်း ​တစ်​စုံ​တစ်​ယောက်​မှ Download ​လုပ်​ယူ​မှု​မ​ရှိ​လျှင် ​အ​ဆို​ပါ​ဖိုင်​သည် ​ဖိုင်​ဆိုက်​ကြီး​သော​ကြောင့် server ​မှာ ​ဖျက်​ပစ်​ခြင်း​ခံ​ရ​ပါ​သည် . ​ဥ​ပ​မာ ... ifile.it ​ဆိုက်​မှာ​ဆို​ရင် ​ဒီ​နေ​ရာ ​မှာ ​သွား​ဖတ်​ကြည့်​ပါ
(၁) ​ပုံ-၁ ​အ​တိုင်း ​ဖိုင်​တစ်​ဖိုင်​ကို Download ​လုပ်​ပြီး​လို့​ရ​လာ​တာ​နဲ့ ​ဘာ​နဲ့​ဆုံး​လဲ ​ကြည့်​ရ​ပါ​မယ် . rar ​နဲ့ ​ဆုံး​လား .001, .002, 003 ​နဲ့ ​ဆုံး​လား​ဆို​တာ​ကို ​သေ​ချာ​ကြည့်​ပါ . ​အ​ခု .rar ​နဲ့ ​ဆုံး​အ​တွက်​အ​တွက်​ကြောင့် win rar (​သို့​မ​ဟုတ်) win zip ​နဲ့ ​ဖြေ​ပါ​မယ် . ​ကျွန်​တော်​က​တော့ win rar ​နဲ့ ​ဖြေ​ပြ​လိုက်​ပါ​တယ် . Guest user ​အ​နေ​နဲ့ ​တင်​ထား​တဲ့​ဖိုင်​ဆို​ရင် ​တစ်​ပတ်​ကြာ​လို့​မှ Download ​လုပ်​မယ့်​သူ​မ​ရှိ​ရင် ​ပယ်​ဖျက်​ပစ်​ပါ​တယ် . Free registered user ​အ​နေ​နဲ့​ဆို​ရင်​တော့ ​အောက်​မှာ ​ရေး​ပြ​ထား​ပါ​တယ် . ​ဖတ်​ကြည့်​ပါ ​သ​ဘော​ပေါက်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် . ​ဒါ့​ကြောင့်​မို့ Download ​လုပ်​တဲ့​သူ​လဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​အောင် ၊ server ​မှာ​လဲ ​ရေ​ရှည်​ရှိ​နေ​အောင်​လို့ ​ဖိုင်​ဆိုက်​ကို 50 ​လောက်​အ​ထိ​ပဲ ​အ​များ​ဆုံး​ထား​ပြီး ​တင်​ပေး​တာ​ပါ .
(၂) ​ပုံ-၂ ​ပါ​အ​တိုင်း ​ကို​ဖြေ​မယ့် ​ဖိုင်​နံ​ပါတ်(၁) (​သို့) ​ဖိုင်​တစ်​ဖိုင်​ဖိုင်​ကို rightclick ​ထောက်​ပြီး extract here ​ကို ​နှိပ်​ပါ​မယ် .
(၃) ​ပုံ-၃ ​ပါ​အ​တိုင်း ​ဖိုင်​တွေ​ဖြေ​နေ​တာ​ကို ​တွေ့​ရ​မှာ​ပါ ..
(၄) ​အား​လုံး​ပြီး​ဆုံး​သွား​ရင်​တော့ ​ပုံ-၄ ​အ​တိုင်း ​ဖိုင်​ဖြေ​ထား​ပြီး​သား ​အ​သစ်​တစ်​ဖိုင် ​ထပ်​ပေါ်​လာ​တာ​ကို ​တွေ့​ရ​မှာ​ပါ . ​ကျွန်​တော်​တို့​လို​ချင်​တာ ​အဲ့​ဒီ့​အ​သစ်​ထပ်​ပြီး ​ပေါ်​လာ​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို​ပါ . ​သ​ဘော​ပေါက်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ် .
​အ​ထက်​က ​ပုံ​ကို​သိပ်​နား​မ​လည်​ရင် movie ​နဲ့​ပါ ​ဖိုင်​ဖြေ​ပြ​ထား​ပါ​တယ် . ​အောက်​မှာ movie ​ရှင်း​ပြ​ချက် ​ဖိုင်​ကို Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ . ​တစ်​ခု​ပြော​ပြ​ပါ​ဦး​မယ် . ​ကျွန်​တော် ​အ​ခု​လို ​အ​ပင်​ပန်း​ခံ​ပြီး ​ရှင်း​ပြ​နေ​တာ . ​သင်​ပြ​နေ​တာ ​ကျွန်​တော် ​တော်​လို့ ​တတ်​လို့ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး . ​ကျွန်​တော့်​တုန်း​က ​အ​ပင်​ပန်း​ခံ​ခဲ့​ရ​သ​လို ​အ​ပင်​ပန်း​မ​ခံ ​စေ​ချင်​လို့​ပါ . ​ကျွန်​တော့်​ဆို​ရင် ​ကွန်​ပျူ​တာ ​စ​ပြီး ​စာ​ရိုက်​သင်​ခါ​စ​က "​ဒ" ​ကို pagemaker ​မှာ ​ရိုက်​မ​ရ​လို့ ​ကျွန်​တော့်​ဆ​ရာ​မှာ​မေး​တာ ​သူ​က​ချက်​ခြင်း​မ​ဖြေ​ပဲ ​လ​ဖက်​ရည်​ဆိုင် ​သွား​လိုက် ​အ​အေး​ဆိုင်​သွား​လိုက်​နဲ့ ​လုပ်​နေ​တာ​ပါ . ​သူ​သွား​တဲ့​နောက်​ကို ​လိုက်​နေ​ရ​တာ​ပါ . ​ဒါ​ကျွန်​တော် ​ဟာ​သ​ပြော​တာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး . ​တစ်​ချို့​တွေ​ဆို​ရင် . ​ကျွန်​တော် ​တစ်​ပြား​တစ်​ချပ်​မှ ​မ​ရ​ဘဲ​နဲ့ ​ပြော​ပြ​ပေး​တာ​ကို . ​ဆဲ​သွား​တဲ့​လူ​တွေ​က ​ရှိ​ပါ​သေး​တယ် . ​ကျွန်​တော်​တို့ ​မြန်​မာ​တွေ​မှာ ​မ​ကောင်း​တဲ့ ​တစ်​ချက်​က ​အဲ့​ဒါ​ပဲ​ဗျ . ​အ​လ​ကား​ရ​တဲ့ ​အ​ရာ​ကို ​တန်​ဖိုး​မ​ထား​တတ်​ကြ​ဘူး . . ​ပိုက်​ဆံ​ပေး​ပြီး ​သင်​ရ​မှ ​ကောင်း​တယ်​ထင်​ကြ​တာ .